Hiran State - News: Wakiilka qaramada midoobay oo aad ula yaabay sida ay shacabka Somaliyeed ula safteen dowlada
Wakiilka qaramada midoobay oo aad ula yaabay sida ay shacabka Somaliyeed ula safteen dowlada
Somaliya:(hiranstate.com)-Shacabka Somaliyeed oo ku jiray mudo 21 sano ah fowdo iyo qalaalaso aan ilaa maanta loo heyn wax rasmi ah oo aduunyada loo sheegi karo marka laga hadlayo Somalida dhexdeeda ayaa hada u muuqda kuwo lugta la galay gumeysi cusub oo ka imaanaya qaramada midoobay iyo wadamo dano fog ka leh dalka Somaliya oo iyagu sabab u ah xasilooni darada ka jirta dalka Somaliya.
Markaad dib u eegto 21kii sano ee ina dhaaftay waxaanu ku jirnay shirar marka la doonayo in la qabto looga yeerayo qeyb bulshada ka tirsan halka kuwo kalena la leeyahay ma imaan kartaan, sidoo kale shirkaasi markow dhamaado waxaa hadane la qabtaa shir kale kedibna waxaa loo diidaa iney ka soo qeyb galaan shirka kuwii ka soo qeyb galay shirkii hore oo waxaa la buun buuninayaa kuwa markaasi shirka lagu casuumo.
Hadaba 21 sano kedib waxaa la waayey qaar bulshada ka tirsan oo isweydiisa war maxey tahay sababta shacabkii Somaliyeed maalinba koox loo casuumayo miyaanu inaga heshiin karin iyo wax la mid ah kedibna waxaa halkaas ku lumay isku xirnaantii, wadanoolaanshahii, derisnimadii iyo waliba dantii guud ee lagu difaaci lahaa dalka iyo dadka Somaliyeed.
Hadaba bal aanu dulmar guud ku sameyno siyaasada Somaliya iyo bilahii ugu danbeyey heerka ay gaartay iyo sida ay waji cusub u yeelatay hada.
Kedib shirar badan iyo fowdo joogto ah waxaa dhawr bilood ka hor loo soo bedelay dalka Somaliya inuu wakiil uga noqdo qaramada midoobay Ambassador Mahiga. Mahiga oo ka duulayey shaqadii uu horey u hayey wakiilkii ka horeeyey isaga Wallad Abdala oo isagu u dhashay dalkaasi Muritaaniya si uu bulshada Somaliyeed iskaka horkeeno waxuu ku dhaqaaqay mashruuc loogu magac daray mashruucii Mahiga iyo reer Mudug, dabcan mashruucaan kii ka horeeyey waxaa loogu magac daray mashruucii Walled Abda iyo maxaakiimta waa lagu guuleystay oo waxuu dhalay madaxweynaha hada jira iyo 275 xildhibaan kedib markii dharaar cad Somalidii kale oo joogta yiri shir Somaliyeed oo wadatashi ah ayaan qabanayaa kedibna u yeeray qaar ka mid ah bulshada Somaliyeed halka uu iska indho tiray kuwii kale.
Mahiga waxuu safar ku tagay Mogdisho isagoo amar dhiibayo ayuu yiri madaxweynaha, R/wasaaraha iyo Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya ha yimaadeen Nairobi oo uu shir ka dhacayo. hadaba maxaa xigay. masuuliyiinta TFGda iyagu daacad ayey iska ahaayeen wey ka yeeleen casuumaadii kedibna webka Hs.com ayaa soo daabacay in qaramada midoobay wadanka ka saareyso 3 masuul ee dalka ugu sareyso markii 3aad.
Runtii go,aankii Mahiga waxaa si buuxda u diiday madaxweynaha Somaliya iyo Xukumada Farmaajo kedibna Somalida oon guul guul iyo handadaad wax looga qaadin ayaa durbaba bilaabay iney qalad tahay in Mahiga uu bah dil ku sameeyo masuuliyiintii dowlada taasina waxey sharaf dhac ku tahay jiritaankeena guud ayey shacabkii intooda damiirka laheyd maskaxda galiyeen.
Shirka oo furmayey 12kii April ayaa shacabkii Somaliyeed ku kala aragti duwanaayeen laakinse waxaan warbixintan kusoo gudbineynaa meeshii ay shacabku u badnaayeen kedib xog ay soo aruurisay Hs.com.
Madaxweyne Shariif iyo xukumada Farmaajo waxey bilaabeen dadaalo ay ku muujinayan in dadka Somaliyeed ay walito xayaatatii ku jirto oo la bad baadin karo waxeyna si waadax ah u diideen shirkii Kenya. shirka oo soo gabo gaboobi raba ayaa waxa tagay wasiiro TFGda ah inkastoy waji gabax kala soo kulmeen hadane shacabku si weyn ayey xukumada ula safteen iyagoo hadafkoodu yahay Shiikh Shariif iyo Farmaajo ka hor wadankaan dad ayaa soo xukumi jiray iyaga kedibna dad baa hogaamin doona laakinse Mahiga waxa uu sameynayo maahan wax wanaagsan kedibna meel ayey iska dhigeen waxa ay xukumada iyo dadka hogaaminayo yahiin.
Waxaa hal mar afka furtay aqoonyahano, siyaasiyiin, musharaxiinta u taagan doorashada soo socota qaarkood, dumar caruur iyo dhalinyaro.
Dadkii dhaliilay Mahiga. aqoonyahano Somaliyeed oo sheegeen in wakiilku howshiisa tahay ergay lakinse uu isticmaalayo awood dheeri ah. Waxaa kale oo isaguna idaacada ka hadlay Madaxweynahii hore ee Somaliya Cabdullaahi Yusuf Ahmed oo isagu sheegay in dalka Somaliya lala doonayo in la galiyo gumeysi hor leh isagoo aad u weeraray masuuliyiintii shirka ka qeyb gashay sida gudoomiyaha barlamaanka iyo Madaxweyne Faroole.
Intii ay socotay dhaleeceynta shirka Kenya Madaxweynaha iyo Xukumada Farmaajo shirar iyo safaro loogu magac daray Do or Die ayey kula jireen Mr Mahiga oo runtii shirkii Kenya ka hor u muuqaal ekaa madaxweyne Somaliyeed halka uu maanta aad ula yaaban yahay sida shacabkii Somaliyeed badnkood ula safteen madaxweynaha iyo R/wasaare Farmaajo xukumadiisa.
Safaradii xukada ay gashay mudadii dagaalka qaboobaa socday.
R/wasaare Farmaajo ayaa safar deg deg ah ku tagay dalka Kenya isla maalintii danbena dib ayuu u soo laabtay waxeyna garoonka diyaaradaha Mogdisho isku dhaafeen madaxweyne Shariif oo isaguna safar ku tagay dalalka, Uganda, Burundi iyo Rwanda, halka uu dib ugu soo laabtay Mogdisho. Madaxweynaha oo aan wax badan joogin ayaa hadane looga yeray Ethiopia Hs.com waxey aheyd webkii ugu horeeyey ee soo qora safarka Madaxweyne Shariif ku aaday Ethiopia.
Madaxweynaha ayaa safarkiisa Ethiopia kula kulmay dhigiisa R/wasaare Malaze oo madaxweynaha Somaliya u sheegay inuu is dejiyo waqtiga ay Qaramada midoobay qabatayne mesha ka baxo si nabad ah waliba. madaxweynaha oo awal qorshahiisu ahaa inuu Ethiopia ka aado Tanzania ayaa dib ugu soo laabtay Mogdisho waxuuna saraf deg deg ah ku tagay Tanzania.
Xukumada Farmaajo intaasi uu madaxweynaha sarafka ku jiray waxey waday shirar iyo telefono ay kula xiriireyso qurbo joogta. hadaba dagaalkii Mahiga iyo xukumada ma dhamaaday mise meeshiisii ayuu walito taagan yahay?
Xukumada Farmaajo waxey iclaamisay shirweyne dib u heshiisiin kaasi oo ka dhacayo magaalada Mogdisho mudo aan hada si rasmi ah loo shaacin. hadaba shirkaasi maxaa laga filan karaa maxuuse yahaya qorshahiisa war bxin dheer ayaanu ka soo diyaarin doonaa dhawaantan. sidoo kale ma laga yaabaa dadka Somaliyeed si looga tashto gacan shisheeye iyo hagardaamadooda iney xukumada Somaliya from madaxweyne ilaa biitooni ay mushaarkooda iyagu bixiyaan iyagoo dhaqaalaha ku baxayo dowlada Somaliya ay 60% bixinayaan qurbo joogta Somaliyeed oo lagu qiyaaso 1.5 million intooda badana ku nool Waqooyiga America, Yurub, Bariga dhexe iyo Asia.
Inta soo hartayna loo daayo ganacsatada Somaliyeed si ugu yaraan looga xoroobo gacan shisheeye. bal eeg hadaan tusaale yar idiin siino xafiiska Qaramada Midoobay ku leetahay dalka Kenya ee UNPOS waxaa la furay dhawr iyo 10 sanoka hor ujeedaduna waxey aheyd in wax la taaban karo loo qabto dalka iyo dadka Somaliyeed maanta waxey leeyahiin ku dhawaan 60 shaqaalo ah oo midka ugu yar mushaar u qaato 24 Kun dolar sanadkii, waxaa taasi ka sii daran ma jirto hal shaqaale ah oo dalka gudahiisa ka howl gala dhamaantood waxey joogaan Nairobi.
Bal Somaliyey isweydii dalka aanu aragnay ma yahay dal dadkoodu ay macaluul u dhintaan?
Bal Somaliyey isweydii ninka ajnabiga ah ee ku dagaal galayo magaca diinta ee madfaca ku garaacayo caasimadii Somaliya yuu dalka ka xoreynayaa yuusa u xoreynayaa?
Bal Somaliyey isweydii 15 Kun ee Africanka ah ee caasimada Somaliya dabaabaadka la dhacayo uu ka xoreynayaa yuusa u xoreynayaa?
Bal Somaliyey isweydii hadaanu diidno masuuliyiinta dowlada federalka sideed kula noolaaneysaa bushada aduunyada inteeda kale ku nool?
Ugu danbeyn inkasta oo aan hal maalin iyo hal habeen wax badan lagu qaban karin oo masuuliyiinta TFGda qaarkood wax badan iney iska bedleaan looga baahan yahay, sida iney hanaanka dowladnimo gaarsiiyaan dalka oo dhan si taasi u suuro gashana iney xoojiyaan nidaamka dowlad goboledyada si calanka Somaliya ugu lusho dalka oo dhan.
Guntii iyo gabogabadii diidmadii ay dowladu diiday shirkii Kenya waxuu shacabka Somaliyeed u ahaa tusaale fiican oo ugu yaraan in TFGdu wax diidi karto waxna ogolaan karto ayey shacabka u iftiimisay.
Dalka Somaliya uma baahna hogaankoodu iney mushaarka siiyaan wadamo dano fog ka leh dalka iyo dadka Somaliyeed. dalka Somaliyeed uma baahna qabiiliste danbe oo shacabkii ayaa macluul u dhamaanayo iyadoo la heli karo wajiyo badan oo dadka iyo dalka lagu bad baadinkaro.
Dalka Somaliya uma baahana media buun buuniya siyaasadaha shisheeyaha waxey u baahan yahiin mediyaha amaba idaacado isku soo dhaweeya dadka iyo dalka Somaliyeed oo waliba iyagoo xumaan ku og dowlada Somaliya hadane marka ay timaado dano shisheeye waa in si rasmi ah loola safto hadba xukumada markaasi jirta ayey tiri haweeney Somaliyeed oo lagu magacaabo Qadro Husen.
Dadka Somaliyeed nolol bey doonayaan.Noloshiina dalkey ku jirtaa.Dalkiina nabad buu u baahan yahay.xaqiiqadu waa sidaa. walito lama arag meel 1.5 billion Chines ah ka nooshahay oo ay 10 million Somali ah macaluul u dhimaneyso, iyagoo dalkaasi quruxda badan leh heysta.
· admin on April 19 2011 15:48:38 · 0 Comments · 1905 Reads ·
14,589,148 unique visits